लकडाउनको नवौं दिन : सबै मुख्य शहर सुनसान, कति पुग्यो कोरोना संक्रमित ? « Naya Page
लकडाउनको नवौं दिन : सबै मुख्य शहर सुनसान, कति पुग्यो कोरोना संक्रमित ?
काठमाडौं, १९ चैत । सरकारले लागू गरेको लकडाउनको नवौं दिन काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकका मुख्य शहर सुनसान छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लागुको लकडाउनका कारण सबै शहर सुनसान भएको हो ।
लकडाउन उल्लंघन गर्नेहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले लकडाउन उल्लंघन गर्ने १५ सय भन्दा बढिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
त्यसैगरी लकडाउनको उल्लंघन गर्ने दुइसय बढी सवारी साधन समेत नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका काममा हिडडुल गर्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने गरेको छ ।
कारवाही स्वरुप सडकमा निस्कनेहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर भेटिएकै ठाउँमा चार घण्टा उभ्याउने नीति प्रहरीले लिएको छ । विश्वव्यापीरूपमा कोरोना भइरसको महामारी बढ्दै गएपछि सरकारले यही चैत ११ गतेबाट लागू हुने गरी अत्यावश्यक बाहेक बाहिर ननिस्कन आदेश जारी गरेको थियो ।
विश्वमा काेराेनाबाट मर्नेकाे संख्या ४२ हजार नाघ्याे
विश्वमा काेरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४२ हजार ५ सय २८ पुगेको छ । ८ लाख ६२ हजार ५७४ जनामा भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ । संक्रमितहरु ठूलो संख्यामा उपचारपछि निको पनि भएका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार एक लाख ७९ हजार १२७ जना उपचारपछि निको भएका छन् ।
कोरोनाको चर्को महामारी खेपिरहेको इटलीमा थप ८३७ जनाको मृत्यु भएको छ । इटालीमा मृतकको संख्या १२ हजार ४२८ पुगेको छ । कोरोनासँग जुधिरहेको अर्को यूरोपेली मुलुक स्पेनमा ८ हजार ४६४ जनाको ज्यान गएको छ । स्पेनमा थप ७४८ जनाको ज्यान गएको छ । यता अमेरिकामा पनि कोराना संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिरहेको छ ।
भारत कोरोना संक्रमित स्ख्या बढ्दाे
नेपालसँग खुल्ला बाेर्डर रहेकाे छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि कोरोनाको महामारी फैलिरहेको छ । भारतमा मृतकको संख्या ४५ पुगेको छ भने एक हजार पाँच सय ९० जना संक्रमित छन् । आम नागरिकले लकडाउन र सरकारी निर्देशन पालना नगरेका कारण क्षति बढिरहेको भारतीय अधिकारीहरुको भनाई छ ।
पाकिस्तानमा २६ जनाको कोरोना भाइरसबाट ज्यान गएको छ भने संक्रमितको संख्या दुइ हजार ४२ पुगेको छ । बंगलादेशमा कोरोना संक्रमणका कारण पाँच जनाको ज्यान गएको छ ।
नेपालमा नयाँ संक्रमण छैन्
नेपालमा बेल्जियमबाट काठमाडौं आएकी २२ वर्षीया युवतीमा कोरोना देखिएपछि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन् । उनी नेपालको पाँचौ सक्रमित व्यक्ति हुन् । उनी बेल्जियमबाट कतार हुँदै काठमाडौं आएकी थिइन् । उनी युवती चैत ४ गते (१७ मार्च) मा कतार एयरवेजको क्युआर ६५२ फ्लाइटबाट नेपाल आएकी हुन् ।
उनीससहित चार जनको उपचार भइरहेको छ । भने एक जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।